Lalao telo misesy - mba hilalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Lalao telo misesy - mba hilalao an-tserasera
rehefa tsy te-hanomboka ny lalao lehibe amin'ny be pitsiny fepetra, fa misy ny faniriana hilalao amin'ny zavatra mora, misokatra-tserasera lalao telo misesy ka hanao sarin-telo, ary kokoa mihoatra ny iray andalana mba hahatonga azy ireo ho manjavona, lasa lalao dia manondro noho ny aminao. Ao amin'io mahafinaritra ny milalao toy ny ankizy, mpiasa birao, mpanao raharaham-barotra sy ny vehivavy mpikarakara tokantrano. Aseho amin'ny fahasamihafana, dia afaka mora amintsika ny hahita ny mpankafy. Tsotra sy mahaliana dingana mba tonga dia mieritreritra momba ny olana maika, na dia tena sarotra ny mahazo ambaratonga.
be ranony Dash
Mpanao bibilava mahagaga
Baolina - fefy shooter
Lalao milay 3
Bubble Pop Tantara
Arabo 1001 Nights
Lolo Kyodai 2
Lalao Telo misesy tamin'ny Category:
Farany Lalao telo misesy - mba hilalao an-tserasera
Ben'ny tanàna Match
Mitifitra Monster Bubble Shooter
Batman Crush Saga
Zoma Alina Funkin Match3
Mifanaraka amin'ny 3 Jewel Pop Pop
Lalao Online Rehetra Lalao telo misesy - mba hilalao an-tserasera
Ny malaza indrindra endriky ny lalao video-tserasera
Indraindray ny olona reraka. Anisan'izany ny tsy tapaka ny adin-tsaina eo amin'ny atidoha sy ny fepetra ny faharanitan-tsaina, ny faharanitan-tsaina, anaka, fandinihana. Atidoha sy ny tontolo volitional mila tsara ihany koa ny fitsaharana. Tamin'ny fotoana ny harerahana mafy any am-piasana, mitaky ny asa sarotra tsaina, ny hevitra rehetra izay tena fampandrosoana tokony niteny na dia fitsaharana, avelao ny fitsaharana ho an'ny tenanao. Manam-pahaizana manokana ny literatiora kosa dia misarika avy ny bokin'ny mpanoratra malaza. Dia manaisotra ny Mijoroa ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ny gazety vehivavy. Mpankafy ny lalao tetikady manala fanahy ho an'ny unpretentious lalao. Zavatra toy ny shuffling dikany taratasy na miverimberina sandriny hetsika tanterahina any amin'ny fiainana ara-tsaina mitovy anjara toerana toy ny hafa. Milalao hetsika sy – ao ny raharaha ny lalao – fampahavitrihana ny maotera kely. Amin'ny reraka asa ireo dia afaka mandany ora. Izany no mahatonga ny fangatahana, ohatra, « ny lalao telo misesy aterineto » maka amin'ny rehetra ny efa misy fikarohana ireo fa ambony toerana. Taorian'ny telo misesy – lalao malaza ity birao izay tsy afaka displace ny toerana ara-toekarena na lalao paikady toeram-piompiana. Zuma sy telo misesy dia iray amin'ireo lalao lehibe ny sisa. Ary tsy izany ihany fa ny asa solosaina. Tsy mitovy fety mitovy amin'ny ny telo misesy nahavita mampiasa ny finday mpanamboatra.
Puzzle genre & laquo, telo misesy » - Ny tena mampiankin-doha tsotra sy lalao izay dia ilaina ny manolotra rojo telo na mihoatra mitovy zavatra. Mety tafiditra ao anatin'izany:
trondro sy ny biby an-dranomasina
tandindona masina fahiny, ary koa ny zavatra hafa maro
Ahoana no milalao ao amin'ny tsipika telo
Ny mpilalao dia tanteraka mahita toerana feno toy izany poti-– tsirairay amin'izy ireo dia hita ao amin'ny kianja iray hafa sela. Afaka Ampifamadiho ny mifanila sary fa izy ireo mitambatra rojo mitsangana na horizontally. Indraindray misy-tsaina, izay ny sela natao araka ny endriky ny toho-tantely misy lafiny enina. Amin'ity tranga ity, fitsipika Azo aoka diagonal rojo. Samy mpanakanto avy hatrany namorona sarivongana intsony, nahoana no voampanga ho voninahitrareo misy habetsahan'ny tombontsoa. Ary ny seza eo an-tampony ny vaovao tapa-ny piozila teo, ary an-tsaha foana ny fitendrena dia mijanona ho feno olo-malaza isan-karazany.
lalao telo misesy matetika amin'ny aterineto handeha any amin'ny tanjona manokana. Ohatra, eo amin'ny isa misy poti ao amin'ny piozila ny fahiny artifact. Izy ireo dia tsy afaka mandray anjara amin'ny fandrafetana ny rojo vy, fa tsy maintsy midina any an-ambany ny milalao an-tsaha – Ary noho izany tsipika tokony voany. Rehefa tonga ny ambany laharana, dia ho anisan'ny asa tanana nangonina. Manodidina ity lalao ity, raha mbola mitohy ny tapaka artifact dia tsy haverina. Ary ny tanjona dia ny hanangona ny fahafinaretana rehetra tanteraka ny fanangonana ny asa tanana – dia mety ho ny tena toy ny fahiny tany Gresy, Mezopotamia, Ejipta, na an'ny noforonin'ny eritreritra toerana, toy ny angano ATLANTIS.
fitsipika izany ihany koa, ary dia entanina mba hanangona zavatra hafa – ohatra,
firavaka ho an'ny Fairy andriambavy
Ny sombiny-pazlinki mba hamorona sary ny sasany
Ao amin'ny Puzzle & laquo, telo misesy » amin'ny hafa karazana sela ao amin'ny nitsinjaka manokana an-tsaha dia misy loko omena iray na voaravaka takelaka metaly sarobidy. Dia tokony ho toy izany dia sela iray anisan'ny rojo nangonina, araka izay hanjavona fifantenana. Ny asa ny mpilalao dia ny deselect ny sela rehetra isaky ny haavon'ny ny lalao. Ireo Puzzles Matetika no natao tamin'ny fotoana voafetra, ary ny mpilalao dia tsy maintsy manangona iray isan'ny teboka mba mandroso ho any amin'ny fihodinana manaraka. Lalao an-tserasera telo misesy manome be dia be ny fitaovana hafa izay Manamora ny vahaolana ny piozila. Ohatra, dia mety ho majika kifafa izay « tohaina » ny votoatin'ny kisendrasendra maro sela. Na angady, manala tapa-damba nalaina manokana ny birao. Misy isan-karazany be ny lalao amin'ny Puzzles & laquo, telo misesy » ho hitanao ato ato amin'ity fizarana ity ny toerana!